Liiska: Shan ciyaaryahan oo Arsenal ah oo xor u ah inay wadahadal la furaan kooxo kale | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Liiska: Shan ciyaaryahan oo Arsenal ah oo xor u ah inay wadahadal...
Liiska: Shan ciyaaryahan oo Arsenal ah oo xor u ah inay wadahadal la furaan kooxo kale
Shan ciyaaryahan oo Arsenal ah ayaa hadda xor u ah inay wadahadalo la furaan kooxo ajnabi ah ka dib markii ay galeen lixdii bilood ee ugu dambeysay qandaraaskooda Emirates Stadium.
Gunners uma badna inay ka wal-walsantahay heshiisyada Calum Chambers iyo Sead Kolasinac , kuwaasoo labadoodaba lagu wado inay noqdaan wakiilo xor ah xagaaga.
Labada daafac ayaa labaduba boos ka waayay garoonka Emirates intii uu joogay Mikel Arteta , inkastoo Kolasinac uu la tacaalayay dhaawac canqowga ah dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
Ciyaaryahanka khadka dhexe Mohamed Elneny ayaa sidoo kale wadahadalo la geli kara kooxo kale, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Masar uu haatan ku dhibtoonayo inuu ku soo galo line-upka Arteta oo ay u muuqato inuu baxo.
Arteta sidoo kale wuxuu leeyahay wicitaano waaweyn oo uu ku sameeyo aagagga weerarka 2022, iyadoo Eddie Nketiah iyo Alexandre Lacazette ay hadda xor u yihiin inay ka wada xaajoodaan heshiisyada qandaraaska hore ee kooxaha kale.
Nketiah ayaa ilaa hadda diiday isku dayga ay Arsenal ku doonaysay in ay heshiis cusub uga saxiixdo, halka Lacazette uu go’aansaday in uu koox cusub raadsado, inkasta oo uu waqti badan ku raaxaysanayay intii uu maqnaa Pierre-Emerick Aubameyang .
Maxaa laga yaqaanaa afarta qof ee uu maanta magacaabay madaxweyne Xasan...
Man City oo Spurs kula dagaalameysa goolhayaha Celtic ee Rory Mahady
Magacyada xildhibaanada maanta shahaadada qaatay
Chelsea oo si Lama Filaan ah ugu Dhaqaaqeysa Xidiga Kieran Trippier
Golaha Wasiirada oo amray in deg deg looga soo saaro ciidanka...
Dagaalka Dhuusamareeb oo xoogeystay iyo wararkii ugu dambeeyey